Ny Seranam-piaramanidina Frankfurt dia mametraka kiosk TS87 6 farany misy biometrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny Seranam-piaramanidina Frankfurt dia mametraka kiosk TS87 6 farany misy biometrika
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Seranam-piaramanidina Frankfurt dia mametraka kiosk TS87 6 farany misy biometrika.
Ny Seranam-piaramanidina Frankfurt dia mametraka 87 amin'ireo Kiosk TS6 farany an'ny SITA manerana ny Terminal 1 sy 2 mba hanatsarana ny traikefan'ny mpandeha.
Nanova ny seranam-piaramanidin'i Frankfurt ny kiosk biometrika sy fandefasana hafatra entana an'ny SITA.
Ny kiosk fidirana TS6 an'ny SITA dia ahafahan'ny mpandeha miditra haingana ary mahazo marika kitapo ho an'ny serivisy fanaterana kitapo ho azy any aoriana.
Miara-miasa amin'ny SITA Flex ireo kiosk ary manolotra traikefa ho an'ny mpampiasa mitambatra amin'ny zotram-piaramanidina maro.
SITA, mpamatsy teknolojia ho an'ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka, dia nanambara ny fametrahana teknolojia lehibe amin'ny Seranam-piaramanidina Frankfurt hanatsarana ny traikefan'ny mpandeha sy hampitombo ny fahombiazan'ny fiasan'ny seranam-piaramanidina. Ny fametrahana dia manasongadina ny fametrahana Kiosks SITA TS87 biometrika miisa 6 ary antenaina ho vita amin'ity taona ity.
SitaNy kiosk fisavana TS6 isan-karazany dia ahafahan'ny mpandeha miditra haingana ary mahazo mari-pamantarana kitapo ho an'ny serivisy fanaterana kitapo tena any aoriana. Miara-miasa ny kiosk Sita Ampifanaraho ary omeo ny mpandeha ny traikefan'ny mpampiasa miray hina amin'ny zotram-piaramanidina marobe, mampitombo ny fanamorana ny fampiasana ary mampihena ihany koa ny teboka ara-batana.
Ny mpandeha dia mijanona amin'ny fanaraha-maso ny safidin-tenany, manomboka amin'ny fisoratana anarana mankany amin'ny fanariana kitapo tena amin'ny alàlan'ny kioska misy biometrika intuitive. Ny vaovao Sita TS6 kiosk no nahazo ny loka IF Design tamin'ny taona 2021 ho an'ny endrika malefaka, maharitra ary adaptive, izay azo amboarina hifanaraka amin'ny famolavolana marika ny seranam-piaramanidina sy ny filan'ny mpanjifa manokana. Ny famolavolana modular dia midika ihany koa fa ny fanatsarana sy ny fanovana dia azo atao nefa tsy manolo ny kiosk manontolo, mitondra tombony fanampiny amin'ny vidiny sy ny tombontsoa maharitra.
Ny Kiosk TS6 an'ny SITA dia azo ampiasaina amin'ny fisavana sy fametahana kitapo manokatra ny lalana ho an'ny dia mandeha amin'ny mpandeha tsy misy fikasihana tanteraka. Ny fametrahana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia maneho ny fampiharana lehibe indrindra an'ny SITA any Eropa.
Dr. Pierre-Dominique Prümm, Tale Mpanatanteraka Aviation & Infrastructure at Fraport, dia nilaza hoe: “Ny fanolorana ny mpandeha amin'ny fomba vaovao sy azo antoka kokoa ary marani-tsaina kokoa hivezivezena, sady manome antoka koa fa manana fiantsonan'ny seranam-piaramanidina maharitra sy mahomby isika dia tena ilaina rehefa miverina amin'ny fiantraikan'ny valan'aretina ny indostriantsika. Ny SITA dia manohana anay amin'ny fanatrarana izany finiavana izany, ary manantena izahay ny hitsena ireo mpandeha maro kokoa eny amin'ny lanitra.”
Sergio Colella, Filoha, Eoropa, SITA, dia nilaza hoe: “Faly izahay manohy manohana ny seranam-piaramanidina lehibe toa an'i Frankfurt amin'ny fahasitranana amin'ny fiantraikan'ny valan'aretina. Ny teknôlôjia dia mitazona ny fanalahidin'ny fanokafana ny dia marani-tsaina sy azo antoka kokoa ho an'ny rehetra, mamerina ny vola very nandritra ny 18 volana lasa, ary miantoka ny fampandehanana moramora izay afaka mampifanaraka amin'ny toe-javatra tsy ampoizina rahampitso. Ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka matanjaka kokoa sy maharitra dia hahasoa ny mpandeha, ny toekarena ary ny asa. "